‘ऐश्वर्य’को प्रोमो रिलिज, हेर्नुस् कस्तो छ ? « Ramailo छ
‘ऐश्वर्य’को प्रोमो रिलिज, हेर्नुस् कस्तो छ ?
कात्तिक ९ गतेदेखि प्रदर्शनमा आउने फिल्म ‘ऐश्वर्य’को प्रोमो रिलिज भएको छ । प्रोमामा अभिनेता रमेश उप्रेती, प्रशान्त ताम्राकार नव नायिका दीपिका प्रसाईं र नायिका केकी अधिकारीलाई देख्न सकिन्छ । दिवाकर भट्टराई निर्देशित फिल्मको प्रोमो मसलेदार छ । प्रोमो हेर्नुस् :
साँगीतिक रिभेञ्ज लभ स्टोरी फिल्म ऐश्वर्य मा अर्जुन पोखरेलेको संगीत, सुदिप बरालको सिनेम्याटोग्राफी र तेञ्जु योञ्जनको कोरियोग्राफी छ । फिल्म निर्माणमा अर्जुन श्रेष्ठ, किरण राणा । निर्मल शर्माले सहकार्य गरेका छन् । ऐश्वर्यको तिमी रोएको पल गीतले दर्शक तथा श्रोताको मन जितिरहेको छ ।